हुण्डाईका विश्वस्तरीय कार उपलब्ध गराएका छौँ : रुपेश शर्मा भट्ट - Naya Patrika
हुण्डाईका विश्वस्तरीय कार उपलब्ध गराएका छौँ : रुपेश शर्मा भट्ट
नेपालमा हुण्डाईका सबै कार लोकप्रिय छन् । यसको कारण के होला ?
हुण्डाईका सबै कार लोकप्रिय हुन सक्नु एउटा आयातकर्ता कम्पनीका लागि खुसीको कुरा हो । हुण्डाईका सबै कार वास्तवमै उत्कृष्ट छन् । हुण्डाई कोरियन ब्रान्ड हो र यसले गुणस्तरमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिने गरेको पाइन्छ ।
विश्वका धेरै देशमा हुण्डाईको प्लान्ट छन् । सबै प्लान्टबाट उत्पादन हुने कार एउटै गुणस्तरका छन् । तसर्थ विश्व बजारमा उपलब्ध गुणस्तरका कार नेपालमा आइरहेका छन् भन्न सकिन्छ । त्यस्तै हामीले नेपालमा कार बिक्री गर्दा कहिले पनि धेरै संख्यामा जोड दिएका छैनौँ, उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्न तल्लीन छौँ ।
नेपालमा हुण्डाईको विश्वस्तरीय मापदण्डकै सर्भिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छौँ । पार्टपुर्जा पनि जतिसक्दो धेरै उपभोक्तालाई नजिकको बिक्री केन्द्रबाट मितव्ययी मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले नेपालभर जति पनि डिलर नेटवर्क बनाएका छौँ, सबैमा सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्टस् (थ्री एस) सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ । हाम्रो चाहना के छ भने उपभोक्ताहरू नेपालभर जहाँको डिलरमा जाँदा पनि एउटै सुविधा पाउन सकून् र एकैठाउँबाट सबै सुविधा लिन सकून् ।
नाडा अटो सोमा हुण्डाई कारको बुकिङ अवस्था कस्तो छ ?
हामीले कुनै पनि अटो सोमा बुकिङलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ । त्यसैले यति बुकिङ गर्ने भन्ने लक्ष्य नै लिँदैनौँ । अटो सोमा धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ता आएर हाम्रो कारका बारेमा जानकारी लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले यहाँ सहभागिता जनाएका छौँ, ब्रान्डलाई बुझाउन खोजिरहेका छौँ । यद्यपि, अटो सोमा आउने उपभोक्ताबाट बुकिङ लिने प्रचलन छ र हामीले पनि बुकिङ नलिई बसेका छैनौँ । हामीले गाडीका बारेमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी दियौँ भने कुनै न कुनै दिन त्यो उपभोक्ता हुण्डाईको कार खरिद गर्न आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्छौँ ।
हुण्डाईसँग ह्याचब्याक, सेडान, एसयुभीलगायत सबै सेग्मेन्टका कार छन् । पर्याप्त सेग्मेन्टमा कार हुँदा धेरै उपभोक्तालाई आफ्नै ब्रान्डमा बाँधेर राख्न कतिको सहज हुने देखिन्छ ?
अवश्य पनि, हुण्डाईसँग पहिलोपटक कार चढ्न चाहने उपभोक्तादेखि लिएर माथिल्लो रेन्जसम्म मोडल उपलब्ध छन् । जसकारण इन्ट्री लेभलको इअन चढ्ने उपभोक्ता अपग्रेड हुन चाहँदा ग्रान्ड आई टेन चढ्न सक्नुहुन्छ । अझ माथि जान खोज्दा आई २० उपलब्ध छ । र, एसयुभी खोज्नेका लागि क्रेटा विकल्पमा छ ।
माथिल्लो सेग्मेन्टमा टक्सन र सान्टाफे छ । यसर्थ एउटा ब्रान्डसँग सन्तुष्ट हुने उपभोक्ताले बाँजुन्जेलसम्म हुण्डाईकै गाडी चढिरहन सक्ने विकल्प खुला छ । हुण्डाईकै कार वर्षौँदेखि प्रयोग गर्ने उपाभोक्ता धेरै हुनुहुन्छ ।
एउटा उपभोक्ताले निरन्तर हुण्डाईकै कार फेर्दै प्रयोग गर्दा कारोबार गर्न हामीलाई पनि सजिलो भएको छ । एउटा ब्रान्डको कार ४–५ वर्ष प्रयोग गरेर अपग्रेड हुन खोज्दा सोही ब्रान्डमा उपलब्ध भएन र अर्को ब्रान्डमा जानुप-यो भने उपभोक्तामा पनि निराशा छाउँछ ।
अहिले हुण्डाई ब्रान्ड भन्नासाथ उपभोक्ता निर्धक्क भएर कार खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । हुण्डाईका उपभोक्ता आत्मविश्वासी पाएका छौँ । हामीले नयाँ कार सार्वजनिक गर्दा धेरै उपभोक्ता तुरुन्तै बुकिङका लागि तयार भएको देख्छौँ । यो सबै ब्रान्ड र प्रोडक्टप्रतिको विश्वास हो भन्ने लाग्छ । मेरो मूल्यांकनमा एकपटक हुण्डाई खरिद गरेका ८० प्रतिशत उपभोक्ताले निरन्तर हुण्डाईकै अन्य कार प्रयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू अन्य ब्रान्डमा नगएर हुण्डाई बाटै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
हुण्डाईको सबैभन्दा सफल मोडलका रूपमा क्रेटा देखिएको छ । र, प्रतिस्पर्धी सेग्मेन्टका अन्य कारलाई उछिनेको छ । क्रेटाको मजबुत पक्ष के हो ?
क्रेटा उत्कृष्ट उत्पादन हो । यो डिजेल, पेट्रोल दुवै इन्जिनमा उपलब्ध छ । स्पोर्टस् युटिलिभी भेहिकल (एसयुभी) सेग्मेन्टका लागि अति उपयोगी साइज ४.२७ मिटरको छ । एसयुभी सेग्मेन्टमा उपभोक्ताले खोजेको सबै सुविधा यसमा पाउन सकिन्छ ।
क्रेटालाई सिटी सवारीकै रूपमा हामीले परिचित गराइरहेका छौँ, तर अफरोडमा समेत लैजान कुनै समस्या छैन । क्रेटामै चढेर काठमाडौंबाट धनगढी, डडेल्धुरा पुग्न कुनै समस्या छैन । क्रेटाको क्लचले सहरी क्षेत्र र राजमार्ग दुवैमा उत्कृष्ट काम गर्ने गरेको उपभोक्ताबाट प्रतिक्रिया पाएका छौँ । हामीले तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेलगत्तै क्रेटा आफ्नो सेग्मेन्ट पहिलो स्थानमा पुगेको थियो । अहिले हुण्डाईले उपलब्ध गराएमध्ये सबैभन्दा बढी बिक्री हुने क्रेटा नै हो ।
भारतमा उत्पादन भएका सवारीसाधन नै नेपालका उपभोक्तामाझ लोकप्रिय छन् । हुण्डाईका अधिकांश कार भारतमै उत्पादन भएर आउँछन् । भारतीय कम्पनीले चाहिँ नेपालको उपभोक्तालाई कत्तिको प्राथमिकता दिएर सवारीसाधन उत्पादन गरेको पाउनुहुन्छ ?
स्वाभाविक रूपमा अधिकांश आयातकर्ता कम्पनीले भारतमै बनेका सवारीसाधन नेपालमा ल्याइरहेको स्थिति छ । भारतमा बनेका कारहरू दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा निर्यात हुने गरेका छन् । यद्यपि भारतमा लगाइएको प्लान्ट त्यहाँको घरेलु मागलाई पूरा गर्नमा बढी केन्द्रित छन् । र, उत्पादन क्षमता घरेलु मागभन्दा बढी हुने भएका कारण निर्यात गरिरहेका छन् । भारतमा प्लान्ट लगाएका कम्पनीलाई निर्यात गर्नुपर्ने भएका कारण नेपाललगायतका देशको बजार महत्वपूर्ण छ । हुण्डाईले चाहिँ कुनै एक–देशलाई लक्षित नगरी विश्वभर एउटै गुणस्तरमा कार उत्पादन गरिरहेको छ ।
दसैैँ, तिहार गाडी बिक्री हुने मुख्य सिजन हो । दसैँअघि आयोजना गरिएको नाडा अटो सोमा देशभरका उपभोक्ता आउने र गाडी बुक गर्ने गरेका छन् । काठमाडौंबाहिरका मानिस अटो सोमा आएर गाडी बुकिङ गर्दा स्थानीय डिलर मर्कामा परेको गुनासो सुनिन्छ । तपाईंहरूचाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
हामीले डिलरलाई मर्का पर्ने गरी कारोबार गर्ने कुनै नीति लिएका छैनौँ । अटो सोमा दाङ, नेपालगन्ज, नारायणघाटलगायत विभिन्न ठाउँबाट उपभोक्ताहरू आउनुहुन्छ । उहाँहरू आएर हुण्डाईको गाडी मनप-यो भनेर बुकिङ गर्न खोज्नुहुन्छ र हामीले बुकिङ पनि लिइदिन्छौँ । तर, गाडी काठमाडौंको सोरुमबाट होइन, उपभोक्ता जुन ठाउँबाट आउनुभएको हो, त्यहाँ नजिकै रहेको डिलरबाट उपलब्ध गराउँछौँ ।
अटो सोमा आएर मनपराएको गाडी किन्न चाहने उपभोक्तालाई अस्वीकार गर्नुहुँदैन भनेर बुकिङ लिइदिन्छौँ । तर, उपभोक्ता बसोवास गर्ने क्षेत्रको नजिकै रहेको डिलरबाट गाडी दिँदा दुवैलाई फाइदा पुग्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो यो नीतिले डिलरहरूको गाडी पनि बिक्री बढ्न गई खुसी व्यक्त गरेको अवस्था छ ।
हुण्डाई कार बिक्री गर्न देशभर डिलर नेटवर्क कस्तो छ ?
हामीले ९ वटा थ्री एस सुविधा भएको आउटलेटबाट हुण्डाई कार उपलब्ध गराइरहेका छौँ । देशका प्रमुख सहरमा डिलर राखेका छौँ, जसबाट हुण्डाई उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्न सकेको छ । उपत्यकाभित्रचाहिँ स्थान अभावका कारण सोरुम र सर्भिस सेन्टर अलग अलग राखेका छौँ । काठमाडौंमा तीनवटा सोरुम र चारवटा सर्भिस सेन्टर छन् ।
अटो सो र दसैँका लागि हुण्डाई कार खरिदमा के कस्तो उपहार योजना राखिएको छ ?
चाडपर्वका वेला कार खरिद गर्दा बम्पर उपहारमा कार नै उपहार दिने प्रचलनको सुरुवात हुण्डाईले गरेको हो । तसर्थ यो वर्ष पनि हामीले यस्तो योजनालाई निरन्तरता दिएका छौँ । बम्पर उपहारमा दुईजना भाग्यशाली उपभोक्तालाई क्रेटा र आई–२० एक्टिभ उपहार राखिएको छ ।
सयजना उपभोक्तालाई १०–१० ग्राम सुन उपहार दिँदै छौँं । सुन पाउने सयजना उपभोक्ता बम्पर उपहारका लागि योग्य हुने सर्त राखिएको छ । जसकारण भाग्य बलियो भएको एउटै उपभोक्ताले सुन र कार उपहारमा पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै प्रत्येक कारमा अलगअलग नगद छुट र स्क्र्याचमार्फत थप नगद छुटको व्यवस्था गरेका छौँ ।
शर्मा भट्ट, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि का बिक्री तथा बजार विभाग प्रमुख हुन् ।
#रुपेश शर्मा भट्ट #हुण्डाई